Kheyraadka | CAADI
Halkan waxaad ka heli kartaa: -
-> Xiriirinta buugaagta kahadlaya fikradaha jinsi ee hada jira. Buugaagta carruurta.
-> Dhakhaatiir dhowr ah ayaa qoraalo ka qoray dhaqdhaqaaqa transgender.
-> Prof John Whitehall wuxuu qorey maqaallo taxane ah oo kusaabsan Gender Dysphoria. Tiro ayaa leh tixraacyo cilmiyadeed iyo mid dawladeed.
-> Waxaa jira isku xiraha bogga Websaydhada Walt Heyer. Walt ayaa ku bedeshay oo ku nooleyd haweeney 10 sano ka hor inta aan la xirin, waxayna hadda taageertaa transgenders kale oo doonaya in ay ka baxaan qaab nololeedka transgender.
-> Dad badan ayaa noloshoodii ka tagtay LGBT iyaga oo caawimaad ka helaya kuwa kale. Kuwani waa sheekooyinka 17 qof oo ka hortagaya sheegashada ah in daaweynta beddelista ay had iyo jeer dhaawacdo dadka.
-> Kahortaga waxyeelada, kor u qaadida cadaalada waa warqad ay soo saartay jaamacada La Trobe University, Australia, oo sheeganeysa in daweynta isdhaafsiga had iyo jeer ay wax u dhimayso dadka. Dr. Con Kafataris wuxuu dhaleeceyntiisii ​​ku qoray warqad La Trobe.
-> Dr John Whitehall wuxuu duubay 12 taxane oo taxane ah oo ku saabsan Dysphoria ee Carruurnimada. Dukumiintiyada cajaladaha fiidiyowga, ee lagu tarjumi karo khadka luqadaha kale, waxaa laga heli karaa halkan.
Prof John Whitehall wuxuu wax ku qoraa joornaalka Quadrant
Maqaallo badan oo ku saabsan Jinsiga Dysphoria, Hormone Blockers iyo wax walba Transgender
Caruurta jinsi ahaanta leh: daaweynta bukaan-jiifka ma caawisaa? - Dr. Robert Kosky.
Tilmaamaha-tilmaamaha Daaweynta Abstract-ka ee carruurta dhibaataysan jinsi hadda ma cadda. Warbixintaan caafimaad waxay sharxeysaa sideed caruur ah oo leh dabeecad jinsi iyo jinsi oo lagu daaweeyay qeybta bukaan-jiifka ee carruurta. Natiijooyinka muddada-gaaban iyo indha-indhaynta caafimaad ee muddada-dheer ayaa la bixiyaa, kuwaas oo tilmaamaya guud ahaan natiijooyin wanaagsan. cadaadis, laakiin nolosha carruurtu waxay kuxiran tahay xigmaddooda.